Fikambanana Archives - Solidis
Tsapanay sy fantatray ny filan’ny banky sy ny orinasa mpampindram-bola. Vonona izahay hijoro ho mpanelanelana mendrika eo amin’ny sehatra antoka mba mampitombo bebe kokoa hatrany ny isan’ny mpanjifa misikatra ny tolotra misy ao amin’izy ireo, amin’ny alalan’ny fiaraha-mizaka izay mety ho voka-dratsy hitranga amin’ny fampindramam-bola omena ireo orinasa madinika sy salantsalany.
Amin’ny maha-mpiray ombon’antoka dia apetrakay ho laharam-pahamehana ireo filanan’ny orinasa mpampindram-bola: etsy andaniny, iantohanay ny fahatomombanan’ireo tetikasa safidinay sy atolotray. Etsy ankilany kosa, miezaka izahay mitady ireo karazana sehatra mety hampiasam-bola izay hahazoana tombombarotra bebe kokoa ho an’ny roa tonta.
Ity karazana fiantohana vaovao ity dia natao hoan’ireo orinasa mpampindram-bola mpiray ombon’antoka izay manana traikefa matihanina fantadaza momba ny fandinihana findramam-bola amin’ny alalan’ny fisoloan-tena amin’ny fanomezana antoka hoan’ireo orinasa madinika sy salantsalany mba hampiroboroboana ny asan’izy ireo sy ny kitapom-bolan’izy ireo.